I-immune thrombocytopenia (i-ITP)
By Uhlaziyo lweMedia; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz. Igqityelwe ukuhlaziywa ngoFeb 25, 2021.
I-immune thrombocytopenia (i-ITP) sisifo esinokukhokelela ekugruzukeni okulula okanye okugqithisileyo kunye nokopha. Ukopha kubangelwa ngamanqanaba eeplatelets aphantsi ngokungaqhelekanga- iiseli ezinceda ukujiya kwegazi.
Eyaziwa njenge-idiopathic thrombocytopenic purpura, i-ITP inokubangela imivimbo emfusa, kunye namachaphaza amancinci abomvu-mfusa abonakala ngathi urhashalala.
Abantwana banokuyiphuhlisa i-ITP emva kosulelo lwentsholongwane kwaye bahlala bechacha ngokupheleleyo ngaphandle konyango. Kubantu abadala, ingxaki ihlala ihlala ixesha elide.
Ukuba awunayo imiqondiso yokopha kwaye ubalo lweplatelet yakho aluphantsi kakhulu, unokungafuni naluphi na unyango. Ukuba iimpawu zakho zinzima kakhulu, unyango lunokubandakanya amayeza okuphucula inani lakho leplatelet okanye utyando lokususa udakada.
I-immune thrombocytopenia ayinakuba nayo imiqondiso kunye neempawu. Xa zisenzeka, zinokubandakanya:
indlela yokusebenzisa ibhinqa le-catheter
Ukutyumza okulula okanye okugqithileyo
Ukopha okuphezulu kulusu olubonakala njengamachaphaza abomvu-bomfusa (petechiae) abonakala ngathi urhashalala, zihlala zisemilenzeni esezantsi
Ukopha kwiintsini okanye empumlweni
Ukuhamba okungaqhelekanga ngokuya exesheni
Yenza idinga nogqirha wakho ukuba wena okanye umntwana wakho uvelisa iimpawu zokulumkisa ezikukhathazayo. Ukopha okungayi kuyeka kungxamiseko lonyango. Funa uncedo kwangoko ukuba wena okanye umntwana wakho uphuma igazi elingenakulawulwa ziindlela eziqhelekileyo zoncedo lokuqala, njengokufaka uxinzelelo kuloo ndawo.
I-Petechiae inokubonakala ngathi irhashalala kwaye ihlala ivela ngokwamaqela. Apha avela emlenzeni (A) nakwisisu (B).
I-immune thrombocytopenia ihlala isenzeka xa amajoni akho omzimba ehlasela ngempazamo kwaye etshabalalisa iiplatelets, eziziziqwenga zeseli ezinceda ukujiya kwegazi. Kubantu abadala, oku kunokubangelwa kukosulelwa yi-HIV, hepatitis okanye H. pylori -uhlobo lweebhaktiriya ezibangela izilonda zesisu. Uninzi lwabantwana abane-ITP, esi sifo silandela ukugula kwintsholongwane, okufana noqwilikana okanye umkhuhlane.
I-ITP ixhaphake kakhulu phakathi kwabafazi abancinci. Umngcipheko ubonakala uphezulu kubantu abanezifo ezinje nge-rheumatoid arthritis, lupus kunye ne-antiphospholipid syndrome.
ipilisi encinci eluhlaza iioxycodone
Ingxaki enqabileyo ye-immune thrombocytopenia yopha kwingqondo, enokubulala.
Ukuba ukhulelwe kwaye inani leplatelet liphantsi kakhulu okanye wopha, unomngcipheko omkhulu wokopha kakhulu ngexesha lokuhambisa. Ugqirha wakho unokucebisa unyango ukuze kugcinwe ukubala okuzinzileyo kweplatelet, kuthathelwa ingqalelo iziphumo zosana lwakho.
Ukufumanisa i-immune thrombocytopenia, ugqirha wakho uya kuzama ukungabandakanyi ezinye izinto ezinokubangela ukopha kunye nenani eliphantsi leplatelet, njengokugula okunganyangekiyo okanye amayeza onokuthatha okanye umntwana wakho.
Uvavanyo lwegazi lunokujonga amanqanaba eeplatelets. Rhoqo, abantu abadala banokufuna uviwo lomongo wethambo ukulawula ezinye iingxaki.
Abantu abane-immune thrombocytopenia encinci abanakudinga nto ngaphandle kokubeka iliso rhoqo kunye nokuhlolwa kweplatelet. Abantwana bahlala bephucula ngaphandle konyango. Uninzi lwabantu abadala abane-ITP ekugqibeleni bayakufuna unyango, njengoko imeko ihlala iba qatha okanye ixesha elide (ixesha elide).
iziphumo ebezingalindelekanga ze potassium
Unyango lunokubandakanya iindlela ezininzi, ezinje ngamayeza okwandisa ubalo lweplatelet yakho okanye uqhaqho lokususa udakada (splenectomy) wakho. Thetha nogqirha wakho malunga nobungozi kunye nezibonelelo zokhetho lwakho lonyango. Abanye abantu bafumanisa ukuba iziphumo ebezingalindelekanga zonyango ziluxanduva ngaphezu kwesifo ngokwaso.
Ugqirha wakho uya kuthetha nawe malunga namayeza e-counter okanye i-supplements oyithathayo kunye nokuba ufuna ukuyeka ukusebenzisa nayiphi na into engavimbela ukusebenza kweplatelet. Imizekelo ibandakanya i-aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin IB, abanye) kunye ne-ginkgo biloba.
Amayeza okunyanga i-ITP anokubandakanya:
IiSteroids. Ugqirha wakho uya kukuqalisa kwi-corticosteroid yomlomo, njenge-prednisone. Nje ukuba inani leplatelet yakho libuyele kwinqanaba elikhuselekileyo, ungayeka ngokuthe ngcembe ukuthatha iyeza phantsi kolawulo lukagqirha wakho. Ukusetyenziswa kwexesha elide la mayeza akucetyiswa kuba anokunyusa umngcipheko wosulelo, iswekile ephezulu yegazi kunye ne-osteoporosis.
I-globulin yomzimba. Ukuba i-corticosteroids ayincedi, ugqirha wakho unokukunika inaliti ye-immune globulin. Eli chiza linokusetyenziswa ukuba wopha ngokunzulu okanye ufuna ukunyusa ngokukhawuleza inani lakho legazi ngaphambi kotyando. Iziphumo zihlala ziphela kwiiveki ezimbalwa.
Iziyobisi ezonyusa ukuveliswa kweplatelet. Amayeza afana ne-romiplostim (Nplate) kunye ne-eltrombopag (Promacta) anceda umongo wakho wethambo uvelise iiplatelets ezininzi. Ezi ntlobo zeziyobisi zinokunyusa umngcipheko wamahlwili egazi.
Ezinye iziyobisi. I-Rituximab (Rituxan, Truxima) inceda ukwandisa ukubala kweplatelet yakho ngokunciphisa ukuphendula kwamajoni omzimba okonakalisa iiplatelets zakho. Kodwa eli chiza likwanokunciphisa ukusebenza kokugonya, okunokufuneka ukuba kamva ukhethe utyando lokususa udakada.
Ukuba imeko yakho inzima okanye iyaqhubeka ngaphandle kwonyango lokuqala lweziyobisi, ugqirha wakho unokucebisa utyando ukuze ususe udakada. Oku ngokukhawuleza kususa owona mthombo uphambili wokutshatyalaliswa kweplatelet emzimbeni wakho kwaye kuphucula ukubalwa kweplatelet yakho, nangona kungasebenzi kuwo wonke umntu. Ukuphila ngaphandle kwepeni ngokusisigxina kwandisa amathuba akho osulelo.
Nangona kunqabile, ukuphuma kwegazi kakhulu kunokwenzeka nge-ITP. Unonophelo olungxamisekileyo luhlala lubandakanya ukutofelw a iiplatelet concentrate. I-Steroids kunye ne-immune globulin nazo zinokunikezelwa ngetyhubhu emthanjeni.
Ukuba une-immune thrombocytopenia, zama uku:
Kulumkele ukudlala imidlalo. Kuxhomekeke kumngcipheko wokopha, iimpembelelo zentloko ngexesha lezemidlalo njengamanqindi, ubugcisa bemfazwe kunye nebhola kunokubangela ukopha kwingqondo yakho. Thetha nogqirha wakho malunga nezinto ezikhuselekileyo kuwe.
Jonga iimpawu zosulelo. Ukuba ususile ipeni yakho, qaphela nayiphi na imiqondiso yosulelo, kubandakanya umkhuhlane, kwaye ufumane unyango kwangoko. Usulelo lunokuba lubi kakhulu kubantu ngaphandle kwepeni.
Sebenzisa isilumkiso ngamayeza e-counter. Iziyobisi ezingabhalwanga njenge-aspirin kunye ne-ibuprofen (Advil, Motrin IB, ezinye) zinokuphazamisa ukusebenza kweplatelet.
Kuba ukubalwa kweplatelet ephantsi akunakubangela zimpawu, ingxaki ihlala ifunyanwa xa kuvavanywa igazi ngesinye isizathu. Ukuchonga i-immune thrombocytopenia, ugqirha wakho kunokwenzeka ukuba ayalele ukuvavanywa kwegazi okufuna ukuzoba inani elincinci legazi elivela kwilungu lengalo. Unokukuthumela kwingcali kwizifo zegazi (i-hematologist).
Nanga amanyathelo onokuwathatha ukulungiselela ukutyunjwa kwakho:
ortho tri ujikelezo lo
Dwelisa naziphi na iimpawu ohlangabezana nazo, kubandakanya ezo zibonakala zingadibani nesizathu sokucwangcisela ukuqeshwa.
Uluhlu lweenkcukacha eziphambili, kubandakanya uxinzelelo olukhulu, utshintsho lobomi, kunye nezigulo zakutshanje okanye iinkqubo zonyango, ezinje ngegazi.
Dwelisa onke amayeza, iivithamini kunye nezongezelelo ozithathayo, kubandakanya iidosi.
Cela ilungu losapho okanye umhlobo ukuba ahambe nawe. Ukongeza ekunikezeleni ngenkxaso, angabhala phantsi ulwazi kugqirha wakho okanye abanye abasebenzi baseklinikhi ngexesha lokuqeshwa.
Uluhlu lwemibuzo oza kuyibuza ugqirha wakho. Ukulungiselela uluhlu lwemibuzo kunokukunceda nilisebenzise kakuhle ixesha lenu kunye.
Imibuzo malunga ne-ITP inokubandakanya:
Zingaphi iiplatelets endinazo egazini lam?
Ngaba inani lam leplatelet liphantsi ngendlela eyingozi?
Yintoni ebangela i-ITP yam?
Ndidinga iimvavanyo ezingaphezulu?
Ngaba le meko yeyokwexeshana okanye ihlala ixesha elide?
Luluphi unyango olufumanekayo, kwaye ucebisa ntoni?
Kuza kwenzeka ntoni xa ndingenzi nto?
Zeziphi iziphumo ezinokubakho kunyango olucebisayo?
Ngaba ikhona enye indlela yokwenza amayeza amiselweyo?
Ngaba unazo naziphi na iincwadana ezinemifanekiso okanye enye into eprintiweyo endinokuhamba nayo? Zeziphi iwebhusayithi ozicebisayo?
vicodin 5 325 yexabiso lesitalato
Zithini iziphumo ebezingalindelekanga zeflonase
Uluhlu lwamayeza ka-sinus amiselweyo
ipilisi yamanzi yokuqumba